ZOO ITUNES MGBE Ị JIKỌỌ IPHONE - ITUNES - 2019
Iji mepụta osisi ezinụlọ, ọ nwere ike iwe oge dị ukwuu ịnakọta ozi na data dị iche iche. Na mgbakwunye, njide ya na mpempe akwụkwọ na aka ma ọ bụ site na enyemaka nke ndị nchịkọta akụkọ ga-ewe oge. Ya mere, anyị na-akwado iji usoro Gramps, ọrụ nke na-enye gị ohere ngwa ngwa mejupụta ozi dị mkpa ma mee ka ezinụlọ gị dịghachi. Ka anyị lebakwuo ya anya.
Usoro ihe omume ahụ na-akwado ọrụ a na-akparaghị ókè, ma na-arụ ọrụ n'ime ha n'otu oge agaghị arụ ọrụ. Ya mere, ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ ọrụ, windo a ga-aba uru, nke na-egosiputa okpokoro nke ọrụ niile e kere. Ị nwere ike ịmepụta, weghachite ma ọ bụ hichapụ faịlụ.
Isi ihe dị na tebụl dị n'aka ekpe, ha nwere ike ịgbanwe site na ịpị bọtịnụ echekwara maka nke a. Na Gramps, a na-ekebanye arụmọrụ gaa n'ọtụtụ ngalaba, na nke ọ bụla nke omume ụfọdụ na-ewere ọnọdụ. Ndị ọrụ nwere ike iweghasị ha, mana enweghi ike ịkpali ha.
N'elu windo dị iche, e nwere ihe osise nke ụdị a chọrọ ka ejupụta, ọ bụghị n'ụzọ zuru ezu, ịgbakwunye mmadụ ọhụrụ na osisi ezinụlọ. Ịga na taabụ dị iche iche, ịnwere ike ịkọwa ihe zuru ezu banyere onye nyere ezinụlọ gị, ruo na ngosipụta nke netwọk mmekọrịta ya na nọmba ekwentị mkpanaaka.
Iji lee ndepụta nke ndị agbakwunyere, ịkwesịrị ịpị taabụ. "Ndị mmadụ". Onye ọrụ ahụ ga-enweta ozi ozugbo na ndepụta nke onye ọ bụla agbakwunyere. Nke a dị mfe ma ọ bụrụ na ezinụlọ ezinụlọ adịworị ibu buru ibu na igodo ebe ọ bụ nsogbu.
Enwe foto na mgbasa ozi ndị ọzọ na otu onye ma ọ bụ ihe omume, ị nwere ike itinye ha na windo pụrụ iche ma mepụta ndepụta zuru ezu. Nnyocha nyocha na-arụ ọrụ na windo a.
N'ebe a, anyị na-ahụ ndị mmadụ na njikọ ha. Ịkwesịrị ịpị otu n'ime akụkụ anọ iji meghee editọ, ebe ị nwere ike tinye mmadụ ọhụrụ ma ọ bụ dezie ihe ochie. Ịpịgharịa na ntanetị na bọtịnụ nri ziri ezi ga-enye gị ohere ịga nchịkọta akụkọ ma wuo usoro nkwukọrịta ndị ọzọ ma ọ bụ wepu onye a n'osisi ahụ.
Ebe na map
Ọ bụrụ na ị maara ebe otu ihe mere, biko gụọ ya na map site na iji akara. Ndị ọrụ nwere ike itinye ọnụ ọgụgụ na-enweghị njedebe nke ebe na map ma tinye nkọwa dị iche iche nye ha. Nchịkọta ga-enyere gị aka ịchọta ebe niile e depụtara mmadụ, ma ọ bụ rụọ ọrụ dịka ọnụọgụ ederede.
Na-agbakwụnye ihe omume
Akụkụ a bara uru maka ndị chọrọ ịmepụta ndepụta nke ihe dị mkpa mere na ezinụlọ. Ọ nwere ike ịbụ ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ agbamakwụkwọ. Naanị aha aha ahụ, gbakwunye nkọwa ya ma gosipụta ya na listi ya na ụbọchị ndị ọzọ dị mkpa.
Ikike iji gbakwunye otu ezinụlọ dum na-agba ọsọ ọsọ na ọrụ ezinụlọ, ebe ọ bụ na ị nwere ike itinye ọtụtụ mmadụ ozugbo, ihe omume ahụ ga-ekesa ha gafee map. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ezinụlọ na osisi ahụ, taabụ ga-enyere aka. "Ezinụlọ"nke ha ga-esonye na listi.
Nhazi ụdị data;
Ọnụnọ nke kaadị.
Mkpụrụ vaịn dị ukwuu maka ịmepụta usoro ọmụmụ. O nwere ihe niile nwere ike ịbara onye ọrụ ahụ n'oge e kere ihe dị otú ahụ. Ihe nhazi data nwere ike inyere gị aka ịchọta ozi dị mkpa banyere onye, ​​ebe ma ọ bụ ihe omume akọwapụtara na ọrụ ahụ.
Download Gramps maka n'efu
Onye na-ewu ụlọ RootsMagic dị mkpa Osisi nke Ndụ Mmemme iji mepụta usoro ọmụmụ
Gramps bụ usoro ihe bara uru maka ịrụ ọrụ n'usoro usoro ọmụmụ. Site n'enyemaka ya, usoro nke ihe okike ga-ewe oge dị ntakịrị, ihe data niile dị mkpa ga-adịkwa nso.
Onye Mmepụta: Nick Wallingford